Xafiiskii Xisbiga Wadajir ee magaalada Garowe oo gabi ahaanba la xiray – War La Helaa Talo La Helaa
Guddoomiyaha gobolka Nugaal ee maamulka Puntland C/salaan Xassan Xirsi (Gu’jir) ayaa la sheegay inuu yahay qofka bixiyay amarka lagu xiray xarunta Xisbigan oo la furay 31-dii bishii hore ee January sanadkan 2019, maalmo kaddib Caleema saarkii Madaxweyne Siciid Deni.
Xubno ku dhow ninka bixiyay amarka lagu xiray xarunta Xisbigan ayaa soo sheegaya in sababta ay la xiriirto in Puntland ay saameyn ku yeelato khilaafka u dhexeeya Xisbigaasi iyo Xukuumadda Soomaaliya.
“Xukuumadda Puntland waxey amar ku bixisay in guud ahaan xisbiyada ka dhisan Soomaaliya, aysan wax xarumo ah ka furan karin deegaannada Puntland, si loollanka u dhexeeya Villa Somalia iyo xisbiyada mucaaradka u saameyn xiriirka Puntland iyo dowladda Federaalka Soomaaliya” ayuu yiri qof la hadlay Warbaahinta gudaha ee Puntland oo ku dhow Guddoomiye Gu’jir.
Ma jirto wax war ah oo arintan ay ka soo saareen Xisbiga Wadajir iyo maamulka Puntland, iyadoo Shacabka Garowe ay hadal hayaan arintan, waxaana xafiiska la xiray uu ahaa xarunta keliyah ee xisbiga Wadajir ka furtay guud ahaan degaannada Puntland.
Shirkadda Spectrum oo war cusub ka soo saartay khilaafka Somalia & Kenya iyo arrinta sahminta shidaalka